Madaxweynaha Galmudug oo Mooshika Ka Dhanka Ah Madaxweyne Xasan Shiikh – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Galmudug oo Mooshika Ka Dhanka Ah Madaxweyne Xasan Shiikh
C/kariin Guuleed ayaa hadalka ka sheegay munaasabad xalay ka dhacday degmada Cadaado oo lagu soo dhoweynayay Safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Kenya Amb. Maxamed Cali Ameeriko.
“Waxaa ogtihiin in labadan maalmood ee la soo dhaafay inuu soo ifbaxay mooshin laga geeyay baarlamaanka federaalka madaxweynaha jamhuuriyada oo la leeyahay waa mooshin xil ka qaadis, shaki kuma jiro inuu baarlamaanka awood u leeyahay, awoodihiisa dastuurka ayay ka mid tahay in Madaxwenaha xilka ka qaadaan”ayuu yiri Madaxweyne Guuleed.
“Waxaa u soo jeedin lahaa baarlamaanka Soomaaliyeed inay dib u eegis aad u weyn ku sameeyaan, loona garto is qab qabsiga hey’adaha dowliga in aanay habooneyn looguna turo dalka marxalada uu marayo, waxaan ognahay xukuumado markii mooshin laga keeno, marka Xukuumadahaas meesha ka baxdo waqtiga qaadanayso in la soo dhiso, tan Madaxweynaha waa ka sii daran tahay, waayo waa shaqsiga dalka ugu sareeyay”ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Mr Guuleed ayaa u soo jeediyay Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka inay ka laabtaan mooshinkaas oo aanan xilligan maslaxad u aheyn marxalada uu dalka ku jiro.
Xildhibaano ka badan 90 xubnood ayaa maalin ka hor u gudbiyay Guddoonka Baarlamaanka mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Soomaaliya, iyagoo qoray document ka kooban sagaal bog oo ah eedeymo Madaxweynaha loogu jeedinayo inuu wax ka qaban waayay xaalada dalka, kuna xadgudbay dastuurka dalka u yaalla.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo shalay ka hadlay mooshinkan ayaa sheegay in aanay habooneyn in si qab qabsi cusub la abuuro, isla markaana mooshinkaas ay wadaan dad qaar ah oo qaswadayaal ah, kuwaasoo uu xusay in la garanayo taariikhda ay siyaasada ku leeyihiin, aanay marna hakin doonin horumarka ay Soomaaliya gaareyso.